Barlamanka DFs oo aqbaley codsiga R.W. Somalia ( Akhri qoraalka)
Muqdisho, Jan 17 2015 [GO]- Barlamanka dowlada Federaalka ayaa fadhigooda maanta ku ogaaladey codsigii Ra'isal wasaraha Somalia in muddo 14 cisho ah la siiyo sidii dib u eegis ugu sameyn lahaa xukumadii dhowaan lagu dhawaaqey.
Fadhiga Barlamanka oo xaadir ahaayeen 164 xildhibaan ayaa waxaa shir gudoominayey gudoomiyaha iyo labadiisa ku-xigeen kuwaas oo qoraalka Ra'isal wasaaraha ka hor akhriyey xarunta mudanayaasha golaha shacabka.
Golaha Barlamanka Somalia ayaa codsiga Ra'isal wasaarah ku aqabaley cod aqlibiyad ah.
Qaraalkaan oo warsidaha Garowe heley ayaa waxaa ku xusnaa in Ra'isal wasaaraha Somalia ku wargalinayo Barlamanka dowlada Federaalka inuu dib ula noqnayo golihii Wasiirada ee uu dhowaan soo magacaabey.
Codsigaan oo gudoonka Barlamanka dowlada Federaalka xaley heley ayaa kulamo la qaatey xildhibaanada kala fikrada duwan iyaga oo ka codsadey in la aqablo codsiga Ra'isal wasaaraha kuwaaoso isku raacey.
Go'aanka dib loogu eegayo dhismaha xukuumada cusub ayaa waxaa wada gaarey maalintii shaley 16 Jan,2015 Ra'isal wasaaraha Somalia, Madaxweynaha dowlada Federalka iyo Gudoomiyaha Barlamanka Jawaari.